Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguCorinne
UCorinne ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-90% yeendwendwe zakutshanje.
I-90% yeendwendwe zakutshanje inike uCorinne iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Iphulo Secret de i villa ejikelezwe yi sublime emathafeni ipaka. Le villa entle kuzisa ndawonye zonke izinto ukuba azive esekhaya. Indawo Spa ezintle elibheke epakini kuya enchant kuwe. A ebusuku uthando okanye ukuhlala usapho ... ndihlala kufutshane mna ziyafumaneka iiyure onke akukho mntu kuba camera esangweni ukuba umntu 5 loo nto umandlalo encinane ngaphezulu ukwengeza kwigumbi lokuhlala leyo efanelekileyo ulutsha ngokwesicelo ukongeza:... i-100% Tarn esigeza kwikhiti Garonne ..Fleurs ..iitshokolethi.
Ngeli xesha Covid Ndilukhankanya ukuba iimakhishithi zinikwe kodwa kubekwa phezu kwebhedi. Nceda musa zeencwadi zika-2 ukuba wena 4 ngenxa yokuba camera esangweni ukuze siya kucela ukuba iindleko ezongezelelweyo ukuba inani labantu linokunyhashwa enkosi.
4.85 out of 5 stars from 237 reviews
4.85 · Izimvo eziyi-237
Uya kufumana iCanal du Midi 100 m kude uhambo oluhle okanye ukukhwela ibhayisekile Ipizzeria 50 yeemitha kude kunye nendawo yokutyela.Ilali ikumgama oyikhilomitha enye nevenkile yepetroli yokubhaka kwikhemesti.
Umbuki zindwendwe ngu- Corinne
Ndifumaneka iiyure ezingama-24 ngosuku. Indlu yam idityaniswe nale.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Grisolles